Inqubomgomo Yokulethwa - UMolooco
Asinaso isibopho sokudiliva okuthintwa amasiko, izehlakalo zemvelo, ukudluliselwa kusuka ku-USPS kuya kumphathi wendawo ezweni lakho noma iziteleka zomoya nezomhlaba zokuhamba noma ukubambezeleka, noma yimali ekhokhwayo eyengeziwe, amasiko noma izinkokhelo zokubuyiselwa emuva ezenziwe.
Qaphela i-1: Asinasibopho uma iphakheji ingathengiseki ngenxa yolwazi lwendawo okuyo olungekho, olungaphelele noma olungalungile. Sicela ufake imininingwane efanele yokuthumela lapho uhlola. Uma ubona ukuthi wenze iphutha emininingwaneni yakho yokuthumela, ngomusa usithumelele i-imeyili ku- [i-imeyili ivikelwe] ngokushesha ngangokunokwenzeka.
2. Sithumele umlayezo ku- [i-imeyili ivikelwe]moloocoPlay okukhombisa inhloso yokubuyisa into. Sicela ufake okulandelayo ku-imeyili:
• Isithombe / ividiyo yento kuye ngento
• Amathegi namalebula kunamathiselwe
• Sicela uqinisekise ukuthi uma ubuya nemikhiqizo, kufanele ibe sesimweni esihle, ingasetshenziswanga, ayigeziwe futhi inepakethe langempela (uma likhona)
• Izinkokhelo zokuqala zokuthumela ngeke zibuyiselwe
Molooco.com iqinisekisa ukuthi noma iyiphi into ethengiwe kithi izobuyiselwa ngaphakathi 7 izinsuku zebhizinisi, isiqinisekiso sokubuyisela emuva imali.
Uma uvumelekile ukuthola imbuyiselo ngokuya ngezizathu zokubuyiselwa imali ezishiwo ngenhla, ungacela ukubuyiselwa imali ku “I-Akhawunti Yami> Ama-oda”Noma ungasebenzisa isixhumanisi esinikezwe ngezansi:
Khetha into noma i-oda lonke bese uqhafaza ku- “cela ukubuyiselwa imali”Inkinobho. Sazise ukuthi ungathanda ukubuyiselwa imali, nencazelo ecacile yokuthi kungani unganelisekile ukulethwa nokulayishwa izithombe noma ezinye izinto ezisekelayo. Sithanda ukwazi ukuthi izinto zonakala kuphi nokuthi singakuthuthukisa kanjani ukwaneliseka kwamakhasimende nesipiliyoni somsebenzi. Udaba ngalunye luzophenywa ngaphakathi 1-2 izinsuku zebhizinisi. Ngenxa yalokhu, ikhasimende lizothola i-imeyili, uma ikhasimende lilungele ukubuyiselwa imali, khona-ke ukubuyiselwa kwemali kuzokwenzeka ngokuhambisana nenqubomgomo yethu yokubuyisa eshiwo ngezansi.